English • Jul 11, 2021
7月10日、我々TTAJチームは、東京の池袋駅でチラシやポケットティッシュなどを配る周知活動を行いました。 今週はRTM チームのご協力をいただいて募金活動を行いました。
10th of July, TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Ikebukuro Station, Tokyo.
We were able to hand out over 600 pamphlets and 600 pocket tissues from 3:00pm till 6:00 pm.
Dquring Fund raising,aJapanese Man in his 60s came donatedawater bottle full of 100 Yen, the total of (¥46,600) , equivalent of around 670000 MMK.
"ပြည်သူတွေမှာ ပြည်သူပဲရှိတယ်" ✊🏻
ယမန်နေ့ ၇ လပိုင်း ၁၀ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Ikebukuro ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ညနေ ၃ နာရီမှ ၆နာရီ အတွင်း
အလှူခံနေစဉ်မှာ အသက်၆၀လောက်ရှိတဲ့ ဂျပန်ဦးလေးကြီး တစ်ယောက်က သူ စုဆောင်းထားတဲ့ ယန်း ၁၀၀ တန် အကြွေစေ့ ဘူးလေးကို လာလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်
(မြန်မာငွေ ၆သိန်း၇သောင်းကျော်တောင်မှ ပါပါတယ်)
မွန်းတည့်နေပူကျဲတဲ ဖြစ်သော်ငြားလည်း မငြီးမငြူဘဲ အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော Guitarist အစ်ကိုနှင့်တကွ ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမားများ၊ Volunteers များအတွက် ရေဘူးနှင့်မုန့်များ လှူဒါန်းပေးပါသောအလှူရှင်များ ၊ TTAJ's Volunteers များအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ 🙏